Mpanamboatra sy mpamatsy rafitra filtration andriamby - Factory Factory Filtration Magnetic System
Takelaka andriamby ho an'ny fisarahana amin'ny fehikibo
Ny takelaka andriamby dia ampiasaina amin'ny fomba tsara hialana amin'ny vy manitsakitsaka amin'ny fitaovana mihetsiketsika entina amin'ny fantsom-boaloboka, fantsom-pohy na amin'ny fehikibo conveyor, efijery ary fantsom-boalavo. Na plastika na pulp taratasy, sakafo na zezika, solika na tombony, ny vokatra azo antoka dia fiarovana ny milina fanodinana.
Separator an'ny Magnetic Grate miaraka amin'ny tsorakazo maro
Manasaraka grates manasaraka miaraka amin'ny tsorakazo maro dia tena mahomby amin'ny fanesorana ny fandotoana ferrous amin'ny vokatra mikoriana maimaim-poana toy ny vovoka, granules, ranoka ary emulsion. Izy ireo dia apetraka mora foana amin'ny hoppers, teboka fihinanana vokatra, chutes ary amin'ny teboka fivarotana entana vita.
Ny vatosoa manintona dia namboarina niaraka tamin'ny grates andriamby sy trano vy tsy misy fangarony na boaty vy fandokoana. Mety amin'ny fanesorana ireo loto mando antonony sy tsara avy amin'ny vokatra maina maimaim-poana. Ampiasaina betsaka amin'ny indostrian'ny sakafo sy ny indostrian'ny simika izy ireo.
Square Magnetic Grate dia misy bara andriamby Ndfeb, ary ny vatan'ny tadin'ny andriamby vita amin'ny vy vy. Ity fomban'ny magnet's grid ity dia azo ampanjifaina mifanaraka amin'ny zavatra takian'ny mpanjifa sy ny toetoetran'ny tranokala famokarana, ny fantsom-pandrefesana mahazatra mahazatra dia D20, D22, D25, D30, D32 ary ect.
Fandrika andriamby dia vita avy amin'ny vondrona fantsom-boaloboka sy trano fantsom-by vy lehibe. Amin'ny maha karazana sivana magnetika na mpampisaraka andriamby azy, dia ampiasaina amin'ny akora simika, sakafo, farma ary indostria mila fanadiovana amin'ny ambaratonga faran'izay tsara.
Fandrika ranoka andriamby
Ny Magnetic Liquid Traps dia natao hanalana sy hanadiovana ireo karazana ferrous avy amin'ny tsiranoka sy fitaovana fanodinana. Ny metaly ferrous dia esorina amina magnetika avy ao anaty rano mikoriana ao aminao ary angonina ao amin'ny fantsom-batana na ireo mpampisara-bazana mavitrika takelaka.
Magnetic Tube dia ampiasaina amin'ny fanesorana ireo loto mandoto amin'ny fitaovana mikoriana maimaimpoana. Ny poti-ferrous rehetra toa ny bolt, ny voanjo, ny puce, ny vy manitsakitsaka manimba dia azo tratrarina ary hitazomana tsara